Wararka horyaalka Ingiriiska - BBC News Somali
Image caption Kooxda Man city
Kooxda hoggaanka u haysa horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ayaa la simatay rikoorka u yaalay, ka dib markii ay xalay gaartay guushii 11-aad ee is xigta ee horyaalkaasi. City ayaa 2-1 uga adkaatay Huddersfield town oo ay marti u ahayd.
Inkastoo Man City goolka lagala hormaray, ayaa haddana waxay labada gool keentay qeybtii dambe ee ciyaarta. Goolka guushana waxaa ayada oo ay lix daqiiqo ka dhiman tahay ciyaarta u dhaliyay Reheem Sterling.
Manchester City ayaa hadda leh 37 dhibcood, ayadoo 8 dhibcood ka koreysa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Manchester United. Dhanka kale tababaraha Burnley, Sean Dyche, ayaa sheegay inuu aad uga xanaaqay guuldarradii kooxdiisa kasoo gaartay Arsenal oo marti u ahayd.
Arsenal ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ee waqtiga dheeraadka ah waxay heshay rigoore uu murran ka dhashay, taasoo uu gool u bedelay Alexis Sanchez.
Macallinka kumeelgaarka ah ee Everton, David Unsworth, ayaa ka dib guuldarradii 4-1 ahayd ee kasoo gaartay Southampton waxaa uu milkiilayaasha naadigiisa ka codsaday inay keenaan tababare si joogta ah u bedala Ronald Koeman oo dhawaan kooxdaasi laga eryay.